सुन्दरताको प्रतीक नै रारा - Rara Sanchar
सुन्दरताको प्रतीक नै रारा
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:०० प्रकाशित मिति : डिसेम्बर 13, 2019
सुन्दरताको प्रतीक नै स्वर्ग हो भने जस्तै स्वर्गको एक टुक्रा खसेजस्तै छ रारा । सुनको बाकसजस्तै लाग्छ रारा देख्दा । उत्कृष्ट सौन्दर्यले भरिभराउ रारा पुग्दा पर्यटकहरुको मन त्यसैत्यसै पुलकित हुन्छ । मोनालिसाको प्राकृतिक रूप जस्तै हो रारा । लियोनार्दा दाभिञ्चीले मोनालिसाको चित्र बनाएथे भने प्रकृतिले रारा बनायो उस्तै सौन्दर्य पूर्ण । म.वी.वि. शाहले राराकी अप्सरा भनेर कविता लेखे । प्रकृतिले दिएको यस्तो अनुपम छटालाई पनि पर्यटकले भरिभराउ बनाउन सकिएको छैन । विदेशी भूमिमा यस्तो मनोरम तालसहितको क्षेत्र हुँदो हो त कसरी पर्यटक तान्थे होलान् ।
रारा कर्णालीको सुनखानी हो भन्दा फरक नपर्ला तर लकरमा राखिएको सुनजस्तै भएको छ । त्यसलाई निकालेर शृङ्गारिक रूप दिन बाकी छ । शब्दमा राराको जति वर्णन गरे पनि अधूरै हुन्छ । रारा पुग्ने पर्यटकहरुले यसको स्वर्गीय आनन्द लिएका छन् । सुनेको रारा भन्दा देखेको रारामा बेग्लै मज्जा छ । हरेक नेपालीले नेपाल केहो भनेर चिन्नु आवश्यक छ । नेपाली भएर जन्मेपछि जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने थलो हो रारा । मुगु जिल्लामा पर्ने यो ताल नेपालको सबै भन्दा ठुलो ताल हो । राराको लम्वाई ५ किलो मिटर, चौडाई ३ किलो मिटर, गहिराई १६७ मिटर स समुन्द्रि सतहबाट २९९० मिटरको उचाईमा रहेको छ । रारालाई शब्दले जति सिँगारे पनि घुम्न नगएसम्म खल्लो भइरहन्छ । रारा एड्भेन्चर प्रा.ली. प्रबन्ध निर्देशक तथा कर्णालीका पर्यटन अभियानता देबि कृष्ण रोकायले रारा जाने निम्तो गर्दै भन्नुभयो – रारा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्न लालायित छ । रारा पृथ्वीमा भएका विभिन्न भू–भाग मध्ये सबैभन्दा सुन्दर क्षेत्र हो । छिनछिनमा रूप बदलिरहने रारा विदेशी भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकको बढी आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । छिन छिनमा रुप परिवर्तन गरि रहने रारा बिहान मन्द मुस्कान संगै, दिउसो हावा संग कावा खेल्ने, साझँपख उत्ताउलिने राराका चरित्र हुन । राराका सुन्दरता संग रमाउन अलि समय बढाउन आवश्यक छ । अब रारा त्यति खर्चिलो छैन । रारा भर्जिन पर्यटकिय गन्तव्य हो । वर्षमा मुश्किलले करिव १५ हजार आन्तरिक पर्यटक र चार सय विदेशी पर्यटक रारा घुम्न पुग्छन् । राराको सौन्दर्य देख्दा लाखौँ पर्यटक पुग्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । कर्णालीको आर्थिक कायापलट गर्नलाई रारा प्याकेजको अन्तराष्ट्रियरुपमा बजारीकरण गर्न सकिएको छैन ।
राराक्षेत्र तालले मात्रै प्रसिद्ध छैन । स्थानीयको जीवनशैली, वन्यजन्तु, स्थानीय परिकार र फरकखालको भौगोलिक बनोटका कारण रारा पुग्ने जो कोहीलाई पनि मोहित हुन्छन् । राराले प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेर उभिएको छ र खाँचो बजारीकरण हो । कर्णालीको गरिबीलाई भजाएर खान पल्केकाहरूलाई पर्यटनको खानी हो भनेर बेच्न सक्दा कर्णालीको उन्नति हुने पक्का छ ।
सुनमाथि सुतेर अरूसँग हात फैलाउनु भन्दा प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेर पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्दा कर्णालीको मुहार फेर्न समय लाग्दैन । स्थानीयले पर्यटनको स्वाद बुझेकै छैन । स्थानीयवासी यसको स्वादमा डुबेपछि रारामा पर्यटकको ओइरो लाग्न थाल्छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पाइने जैविक विविधा र मुगुको अग्लो ठाउँ छायाँनाथबाट देखिने मनै लोभ्याउने दृश्यलाई शब्दमा वर्णन गर्दा अपूरो हुन्छ । छायाँनाथबाट सैपाल हिमाल र आठ जिल्ला हेर्न पाइन्छ । तालको पुरै दृश्य हेर्न वा फोटो खिच्ने हो भने मुर्मा टप रोज्नुपर्छ । मुर्मा टप जान रारा नजिकको एक मात्र गाउँ मुर्मा गाउँ हुदै करिव २ घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिन्छ । पर्यटन अभियानता देबिकृष्ण रोकायाले सुझाव दिँदै भन्नु भयो ।
रारातालको एक फन्को लगाउन करिव ५ घण्टा समय दिनुपर्छ । १६ किलोमिटर ताल वारपारको लम्बाइ छ । फन्को मार्दै र राराका असला माछा हेर्दै हिँड्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । ‘तीन हजार मिटरको उचाइमा पनि असला माछा हुनु राराको थप आकर्षण हो । रारातालको ’round साइक्लिङ, हाइकिङ, घोडा चढ्न र तालमा डुङ्गा सयर गर्न सकिन्छ । रारा साहसिक यात्रा गर्न चाहनेहरूका लागि मात्र नभएर धामिर्क पर्यटकका लागि पनि उत्तिकै रोमाञ्चकारी गन्तव्य हो । ताल वरिपरिका महादेवका मन्दिरले पनि धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण झल्को दिन्छ । कसरी जाने रारा भन्ने अलमल छ रु आउनुस् रारा जाने योजना बन्दै हो भने पुग्ने माध्यमतर्फ लागौँ । रारा यात्रामा हवाईमार्ग र स्थलमार्गबाट पनि जान सकिन्छ । समय थोरै छ र जाने इच्छा छ भने हवाईमार्ग छान्नुहोस् ।
काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज सम्म र नेपालगञ्जबाट मुगुको ताल्चा विमानस्थलसम्म हवाईजहाजले जोडेको छ । यो प्याकेजमा २ रात ३ दिनको हुन्छ । खान वस्न रप्लेन भाडा सतहित करिव ३० हजार देखि ३५ हजार लाग्छ भने । नेपालगञ्जबाट मात्र करिव १७ हाजार देखि २० हजार सम्म खर्च लाग्द छ । एक साताको प्याकेजमा स्थलमार्गबाट काठमाण्डौ, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, सिन्जा हुदै रारा पुग्न सकिन्छ । एक तर्फि स्थलमार्ग र एक तर्फि हवाईमार्गबाट पनि रारा घुमेर फर्किन सकिन्छ । नेपालगञ्जबाट रारा तारा एअर, सिता एअर, समिट एअरले उडान भदै आएकाछन् । राजधानीबाट सुर्खेतसम्म बस र त्यसपछि कालीकोटको सदरमुकाम मान्मसम्म अर्को बसमा गएर मुगुको गमगढी पुगिन्छ । यसको लागि समय अलि बढी खर्चिनुपर्छ । समय छ भने तीन हजार वर्षअघि खस भाषाको उत्पत्तिको थातथलो जुम्लाको सिँजा भ्याली घुमेर फर्किंदा सुनमा सुगन्ध भएझैँ हुन्छ । रारा जानलाई विगतको जस्तो कठिन छैन, जहाज र बस दुवै मार्फत पुग्न सकिने र एक सातादेखि दश दिनका टुर प्याकेज उपलब्ध छन् । सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्म ३५० किलोमिटर सडक छिट्टै कालोपत्रे हुँदैछ ।
मुर्मा टपबाट देखिने राराको दृश्य
जहाजबाट जाने भए ३५ हजार रुपियाँको प्याकेज छ भने बसबाट जाने भए १७ हजार र जिव बाट जानलाई प्रति दिन तेल हालेर ६ हजार देखि ७ हजार ुसम्म जान सकिन्छ त्यस्तै १७ हजार देखि ३५ हजारसम्म र को प्याकेजमा जान सकिन्छ । रारामा सुविधाजनक होटलहरू थोरै छन् । जानुभन्दा अघि नै होटल बुक गरेर जाँदा दुख नपाईने रारा मुर्मा होमस्टेका संचालक देबिकृष्ण रोकाया बताउन्छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जबाहिर बन्दै गरेका होटलहरूले रारा घुम्न आउने पर्यटकका लागि सुविधा हुनेछ । राजधानीको तनावलाई हटाउने हो भने रारा पदयात्रा रोज्नुस् । रारामा मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चल्छ । राराताल घुमेको फोटो डाटाबाटै अपलोड गरेर छिन भरमै साथीभाइलाई लोभ्याउन सकिन्छ ।
३० पुस २०७४, आईतवार १७:२५